Waa kuma Mateo Kovacic? Xiddiga ay Real Madrid beri u xil saaratay inuu meel saaro Lionel Messi…(Wax badan ka baro Kovacic) – Gool FM
Waa kuma Mateo Kovacic? Xiddiga ay Real Madrid beri u xil saaratay inuu meel saaro Lionel Messi…(Wax badan ka baro Kovacic)
Byare December 2, 2016
(Spain) 02 Dis 2016. Mateo Kovacic ayaa beri qoorta suran doona sida la filayo shaqada ugu adag kubbada cagta adduunka maadaama la doonayo inuu joojiyo lama joojiye Lionel Messi kulanka berito ee El Clasico ee lagu ballansan yahay Camp Nou.
Lionel Messi waa laacibka ugu goolasha badan taariikhda kulamada El Clasico iyo horyaalka Spain, laakiin macallin Zidane ayaa doonaya inuu Kovacic u adeegsado sidii uu u joojin lahaa xiddiga reer Argentina si la mid ah sanadii hore markaa uu Casemiro u adeegsaday shaqadaa adag.
Haddaba waa kuma Mateo Kovacic?
Wuxuu u dhashay Croatia wuxuuna ku dhashay Austria, wuxuu ku biiray Akaadamiyada LASK Linz isagoo lix jir ah, markii uu ahaa 13-jir uun waxaa bartilmaameedsanayay kooxaha ugu waa wayn Yurub, laakiin reerkiisa ayaa go’aansaday inuu u dhaqaaqo Dinamo Zagreb.
Waxaa gaaray dhaawac daran 2009-kii kolkaa oo lugta ka jabay taa oo keentay inay cabsi wajahdo mustaqbalkiisa fog ee kubbada cagta, laakiin wuu ka soo kabsaday si uu kulankiisii ugu horreeyay ugu safto macallinkii hore ee PSG Vahid Halilhovic isagoo 16-jir ah, gool ayuuna dhaliyay si uu u noqdo da’yarkii ugu horreeyay ee gool dhaliya taariikhda horyaalka, wuxuu jiray 16-sano iyo 198-maalmood.
2012-kii isagoo boos joogta ah ka heysta kooxdiisa ayuu ka jabay mid ka mid ah lafaha cagta lugta kulan ka tirsanaa isreeb-reebka Champions League.
Labadii sano ee ugu horreysay uu ka tirsanaa kooxda ka dhisan caasimadda Croatia wuxuu kula guuleystay labo horyaal oo isku xigta.
Kovacic ayaa intaa kaddib adduun dhan 13-milyan oo bound ugu soo dhaqaaqay naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga, kooxda ayaa aamintay 19-jirka iyadoo u gacan galisay No.10 uu banneeyay Wesley Sneijder.
Si joogta ah ayuu ugu ciyaarayay labo kal ciyaareed, wuxuuna sameeyay saddex caawin kulankii ugu dambeeyay waayaha ciyaareed ee kabtan Javier Zanetti.
Sanadkiisii labaad ee Inter Milan saddexleey ayuu ka dhaliyay Europe League wuxuu kaloo dhaliyay goolashiisii ugu horreeyay ee Serie A.
Kooxda reer Talyaani ayaa diyaar u ahayd inay sii heysato Kovacic oo ay kooxda ku dul dhisto laakiin Roberto Mancini ayaa sheegay in lagu qasbay in la iibiyo laacibka wax uu ku sheegay xeerka dhaqaalo wanaaga ee FIFA iyadoona laga iibiyay Real Madrid 2015-kii.
Wuxuu u ciyaaray Los Blancos sideed kulan markii ay heysay wadadii ay ugu guuleysatay Champions League kal ciyaareedkii tagay.
Waa sidee qaab ciyaareedkiisa ama yuu kaga eg yahay hab ciyaareedka?
Tababarihii hore ee xulka Talyaaniga iyo Inter Milan Giovanni Trapattoni ayaa mar ku tilmaamay qaab ciyaareedka Kovacic isku darka kubbada Kaka iyo Clarence Seedorf.
Xiddigan ayaa qadka dhexe ee fog kubbada ka soo qaada isagoo weerarka keena.
Haddaba su’aasha ayaa ah Kovacic ma joojin karayaa Messi kulanka berito?
Inkastoo aysan shaki ku jirin qaab ciyaareedkiisa wacan misane malahan awooda Casemiro ee qadka dhexe ee daafaca.
Kovacic kuma ciyaari doonto tiisa ugu fiican ama awoodihiisa haddii loo xil saaro inuu cagta cagta u saaro Messi.
Isku soo wada duuboo cidna ma fileyn howshii uu Casemiro qabtay sanadkii la soo dhaafay kolkaa uu meel saaray xiddiga shanta jeer ku guuleystay abaal marinta Ballon d’Or ee laacibka ugu fiican adduunka, sidaa darteed waa suuro gal inuu Kovacic qabto shaqo la mid ah tii Casemiro.
W/D: Abdisamed Mohamed Hassan (Black Yare).
Kooxda Juve ee Atalanta wajahaysa oo la magacaabay (Dybala maku jiraa?)
Kooxda Juventus oo daba joogta Juninho-ha cusub!